Thread နှင့် မသက်ဆိုင်သည်များကို ဖျက်ထုတ် — MYSTERY ZILLION
Thread နှင့် မသက်ဆိုင်သည်များကို ဖျက်ထုတ်
Thread နှင့်မသက်ဆိုင်သည်များကို ဖျက်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါသည်။ စည်းကမ်းချက် post နှင့် အခြား post အဟောင်းများကို ဖျက်ထုတ်လိုက်ပါသည်။ ထို့အပြင် အချင်းချင်း ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားစေရန် အကြောင်းပြချက်ရှိသော post များကို ဖျက်ထုတ်လိုက်သည်။
နောက်နောင် ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားသော post , thread တွေကို ဖျက်ထုတ်ပါမည်။ thread နှင့်လမ်းကြောင်းလွှဲနေသော post များကို ဖျက်ထုတ်ပစ်ပါမည်။ ရန်ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ ဦးတည်စေသော post များကို ဖျက်ပါမည်ဆိုတာကို သတိပေးအပ်ပါသည်။
ဒီစနစ်ထုတ်တာ ကောင်းပါတယ်။အားလုံးလည်း လက်ခံနိုင်မှာပါ။Thread တွေလည်း စုစုစည်းစည် ဖြစ်မယ်။နောက် အငြင်းပွားဖွယ်တွေကလည်း လျော့သွားတာပေါ့။
ရှိစုမဲ့စုအနော့် post လေးတွေတော့ပါသွားရှာပေါ့ဂျာ....:((:((:((
(ဟိဟိ......နောင်ဂျိန်post တွေပဲရေးလို ့ဖြစ်မယ်)
ဖျက်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖျက်တယ်ဆိုတာ PM ပို ့ပေးပါနော်........:77:
နောက်မို ့ဆို Post တွေပျောက်တယ်ဆိုပြီး ရှုတ်နေကြဦးမယ်.........:68:
(ဖျက်မယ်ဆိုတာကို ကြိုပြောရင်လည်းကောင်းတယ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖျက်လို ့ရတာပေါ့):D
အပြည့်အဝကိုထောက်ခံ၏။ အရည်မရ အဖတ်မရ ကိစ္စများအတွက် မည်သူမျှခေါင်းခြောက် ခံရန်မသင့်ပါ။ အရည်ရောအဖတ်ရော ရချင်ရင်တော့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ကိုသာ သွားကြပါ။:d စောစောစီးစီးသတိပေးပါ။ သတိပေးလို့မရရင်တော့ ပိတ်ပါ ဖျက်ရန်လိုသည်ဟု ထင်သည်များကို အက်ဒမင်များအား ပြောပါမယ် ကိုယ်တိုင်သာဖျက်ကြပါ (အဆဲခံမှာကိုလည်း ကြည့်ရှောင်ရသေးတယ်လေ :d)။ ဒါခေါင်းအအေးဆုံး ဖြေရှင်းနည်းပဲ။:d
ကောင်းပါတယ် နို ့မို ့ဆို thread တွေအရမ်းပွနေမယ်
နောက်ပြီးတော့် thread ထပ်တာတွေကိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစိသွားတာပေါ့
Right & Great ....
However, this should be not foramoment but for long time.
We all have to care and obey the disciplines that we (ourselves) made.
မှန်ပါတယ်..တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခိုက်ရန်ဖြစ်မယ့် post တွေကို မင်မင် များမှ ဖျက်ပစ်ဖြင်းကို အပြည်အ၀ထောက်ခံပါတယ်...နောက်နောင် ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လည်း မင်မင် များမှ စောင့်ကြည့်ပြီး အချိန်မလွန်ခင် လုပ်သင့်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်သင်ပါတယ်...အများအကျိုးမရှိမယ့် မည်သည့် post ကိုမဆို ဖျက်ပစ်ရန် ကျွန်တော်မှ ထောက်ခံပါတယ်။။:)
thread နဲ့ မဆိုင်သော member အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားစေသော post များကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖျက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်နောင်တွင်လည်း ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားစေသော အကြောင်းအရာ post များကို ဖျက်ထုတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါတယ်။
ကိုပီဇီ နှင့် စည်သူ Admin ရာထူးမှ ထွက်ခွာ
ကိုပီဇီ နှင့် စည်သူ တို့ ကိုယ်တိုင် အနားယူလိုသည်ဟု ပြောခြင်း။ ထို့အပြင် အပြင်လောက ပြသနာများ ဖြေရှင်းနေရခြင်း။ မိသားစု ပြသနာများ ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် admin မှ ထွက်ခွာခြင်းကို ကျွန်တော် စေတန် ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ နောက်နောင်တွင် ထိုနှစ်ဦးအနေဖြင့် MEMBER အနေနဲ့သာရပ်တည်တော့မည် ဖြစ်သည်။
PS: ကိုပီဇီ နှင့် စည်သူသည် မလိုအပ်သော thread များကို မဖျက်ခင်ကတည်းက ထွက်ပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်ပြန်ရန် နောက်ကျသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ် ... ကျွန်တော်မဖျက်ဘူးနော် ... သူများတွေက ကျွန်တော်ဖျက်တယ်ထင်နေမယ် .... ကျွန်တော် မဖျက်ခင်ကတည်းက Admin Panel ကို လွတ်ပြီးသား ဖျက်လို့လည်း မရတော့ဘူး။ ခုလို ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုစေတန် ... ကျွန်တော်ကတော့ မင်ဘာအနေနဲ့ပဲ ဆွေးနွေးတော့မှာပါ .... အားလုံးသော မိတ်ဆွေအပေါင်း လွန်တာရှိ ဝဋာမိပါဗျာ ... မောင်လဂျမ်းဆိုတဲ့ ဘဲတော့ မပါဘူး ... ကျွန်တော့်ကို ဥပစ်ခါလို့ ပြောလို့ ... နောက်ပြီး သူက သုံးစရာရှိသေးတယ်လေ ... MMEnglish မှာ ... ခက်တာက MMEnglish က တက်မလာရှာသေးဘူး ... သနားပါတယ် ... (သိပါဘူးဗျာ ... ပို့စ်တွေကို ကိုဒီဘီကြီး ဖျက်တယ်ထင်လို့ ... ခုမှ သိတယ် ကိုစေတန်ဖျက်တာကိုးဗျ ... ကောင်းပါတယ်လေ ... )
ကိုပီဇီ နှင့် စည်သူ Admin ရာထူးမှ ထွက်ခွာသွားကြောင်းကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါ။
အပြင်မှာ ... အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ .....
ကိုပီဇီ နှင့် ကိုစည်သူ.. တို့နုတ်ထွက်သွားကြောင်းသိရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..
စေတန်ရေ ကျေးဇူးကွယ်။ member အနေနဲ့ လွတ်လပ်လို့ပါကွယ်။ MZ ကို ချစ်သော်လဲ စိတ်တွေ အရမ်းပင်ပန်းလွန်းလို့ပါ။
ဒီ mz ကိုရောက်တာမကြာသေးဘူးဗျ...နေ့တိုင်းတိုင်းလိုလို၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်...
ဟိုတနေ့က mz ကို ၀င်မရတော့တော်တော်လေးစိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်..........
ကိုပီဇီနဲ ့ကိုစည်သူထွက်သွားလို ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရိုးရိုး member အနေနဲ ့လည်း၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖို ့တောင်းဆိုပါတယ်
ကိုပီဇီ နဲ့ ကိုစည်သူတို့ admin ကနေ နားလိုက်ပေမယ့် (ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သွားတာပေါ့ ...:D) member အနေနဲ့ ဆက််လက်ကြည့်ရှုရေးသားကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်လျက်ပါ ... များများရေးနိုင်ပါစေဗျာ ....:77:
i am agree with the adminstrator for the wellfare of all user.
ကိုပီဇီ နှင့် ကိုစည်သူ Admin ရာထူးမှ ထွက်ခွာသွားကြောင်းကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါ။
ကိုပီဇီ နှင့် ကိုစည်သတို့ူ အပြင်မှာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်လဲ အမ်ဇက်မှာ ရန်ပွဲတွေ မျက်လှည့်ပွဲတွေ မရှိပဲ members များ ကလဲ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ နေနိုင်၍ အဒ်မင်များ၊ moderators များ ကလဲ ကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို ကိုယ်ပြန်လိုက်နာခါ ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်တဲ့ ဖိုရမ်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။:)
ကောင်းပါ့ဗျား .... သူ့မှာ ကတ်ကြေးတစ်လက်ရသွားပြီကွ ... ဘာမှ ပူမနေနဲ့ အကုန်ဖြတ်တော့မှာပဲ ... ဒါပဲ တတ်တယ်လေ ... ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ စွမ်းအားက .... ကတ်ကြေးပဲ ... ကျွန်တော်က မင်ဘာတောင် လုပ်ချင်စိတ်ကုန်နေပြီ ... ခင်ဗျားကြောင့် မဟုတ်ဘူးနော် ...
ဟုတ်ကဲ့ပါ အကိုကြီးရေ ကျနော်လဲ အကိုကြီး အတိုင်းပါပဲ ခင်ဗျာ။ ပြောမှားဆိုမှား ရှိတာတွေအားလုံး ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ အဲဒီကတ်ကြေးက မျက်စိမပါပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံး လွန်တာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါခင်ဗျာ (ခွန့်ဆိုတဲ့ အကိုလေးကလွဲရင်ပေါ့)
ဟီး ငါကတို့ကို ဥပစ်ခါ (username အမှန်ကပေါင်းရခက်လို့ ပေါင်းတတ်သလိုပေါင်းလိုက်တာ) ကြီးကိုပြန်တောင်းပန်လိုက်တော့မယ် သူ့မှာသမီးရှိတယ်တဲ့ ခိုင်လုံတဲ့သတင်းရပ်ကွက်ကအတိအကျရတာ တော်ကြာငါ့ကိုစိတ်ကွက်သွားမှဖြင့်:D